ဇီနွန် - ဝီကီပီးဒီးယား
/ˈzɛnɒn/ or /ˈziːnɒn/
ZEN-on or ZEE-non
အိုင်အိုဒင်း ← ဇီနွန် → ဆယ်ဆီယမ်
သိပ်သည်းမှု (သုည °C)
0, +1, +2, +4, +6, +8 ​(rarely more than 0;aweakly acidic oxide)
−43.9·10−6 cm3/mol (298 K)
အတည်ငြိမ်ဆုံး ဇီနွန်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
0.095% is stable with 70 neutrons
syn 16.9 h ε 1.652 125I
0.089% is stable with 72 neutrons
syn 36.345dε 0.662 127I
1.910% is stable with 74 neutrons
26.401% is stable with 75 neutrons
4.071% is stable with 76 neutrons
21.232% is stable with 77 neutrons
26.909% is stable with 78 neutrons
syn 5.247dβ− 0.427 133Cs
10.436% is stable with 80 neutrons
syn 9.14 h β− 1.16 135Cs
8.857% 2.165×1021 y β−β− 2.45783 136Ba
ဆာ ဝီလျံ ရမ္မဆေးနှင် မောရစ် ထရဲဗား နှစ်ဦးတို့သည် လေရည်ကို အဆင့်ဆင့်ပေါင်းခံယူကြသည်။ ထိုအခါ လေထုတွင်ပါရှိသော အစွမ်းမဲ့ ဓာတ်ငွေ့များတွင် အလေးဆုံးဖြစ်သော ဓာတ်ငွေ့တစ်မျိုးကို တွေ့ကြလေသည်။ ထိုဓာတ်ငွေ့သည် လေထု၏ထုထည် အပုံ ဆယ်သန်းတွင် တစ်ပုံသာပါ၍၊ အရှားဆုံး ဓာတ်ငွေ့လည်းဖြစ်၏။ ယင်းကို ဇီနွန်ဟု အမည်ပေးကြသည်။ လေထုတွင်ပါရှိသော ဟီလီယမ်၊ နီယွန်၊ အာဂွန်၊ ကရစ်ပတွန်နှင့် ဇီနွန်ခေါ် အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့များသည် အလှည့်မှန်ဇယားတွင် သုညအစု၌ပါဝင်သည်။ ထိုအစုတွင် နောက်ဆုံး၌ ပါဝင်သည့် ရေဒွန်ကိုမူ လေထုထဲတွင်မတွေ့ရဘဲ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြောင့် ပြောင်းလဲမှု များဖြစ်ရာ၌သာ တွေ့ရသည်။
ဇီနွန်သည် အရောင်နှင့် အနံ့မရှိသော ဓာတ်ငွေ့ဖြစ်၍ နိုက်ထရိုဂျင်ထက် ၅ ဆ သိပ်သည်းသည်။ သင်္ကေတမှာ (Xe သို့မဟုတ် X)ဖြစ်သည်။ အက်တမ် နံပါတ်စဉ်နှင့် အက်တမ် အလေးဆများမှာ ၅၄ နှင့် ၁၃၁.၃ အသီးသီးဖြစ်သည်။ အခြား အစွမ်းမဲ့ဓာတ်ငွေ့များကဲ့သို့ပင် ဇီနွန်သည် ဒြပ်ပေါင်းများ မဖြစ် ချေ။ ရောင်စဉ်ဖြင့် ဓာတ်ခွဲရာတွင် အာဂွန်နှင့် အနည်းငယ်တူသည်။
↑ Simpson၊ J. A.; Weiner၊ E. S. C., eds. (1989)။ "Xenon"။ Oxford English Dictionary။ 20 (2nd ed.)။ Clarendon Press။ ISBN 0-19-861232-X။
↑ Xenon။ Dictionary.com Unabridged (2010)။ 2010-05-06 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Xenon။ Gas Encyclopedia။ Air Liquide (2009)။
↑ ၅.၀ ၅.၁ Haynes၊ William M., ed. (2011)။ CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd ed.)။ Boca Raton, FL: CRC Press။ p. 4.123။ ISBN 1439855110။
↑ Hwang၊ Shuen-Cheng; Weltmer၊ William R. (2000)။ "Helium Group Gases"။ Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology။ Wiley။ pp. 343–383။ doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01။ ISBN 0-471-23896-1။
↑ "Improved measurement of the 2νββ half-life of 136Xe with the EXO-200 detector" (2014). Physical Review C 89. doi:10.1103/PhysRevC.89.015502.
↑ "Mass and Double-Beta-Decay Q Value of 136Xe" (2007). Physical Review Letters 98 (5): 53003. doi:10.1103/PhysRevLett.98.053003. Bibcode: 2007PhRvL..98e3003R.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇီနွန်&oldid=723182" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၈:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။